Shirkadaha safarka waxay isticmaalaan tignoolajiyada si ay si wax ku ool ah ula macaamilaan macaamiisha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » Shirkadaha safarka waxay isticmaalaan tignoolajiyada si ay si wax ku ool ah ula macaamilaan macaamiisha
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
Doorka tignoolajiyada ayaa inta badan hoos loo dhigaa si loo wanaajiyo khibrada macmiilka ee khadka tooska ah iyo khadka tooska ah iyada oo gacan ka geysanaysa dhimista kharashaadka, warbixinteena waxa ay muujinaysaa in darawaladani ay aad u sii faafsan doonaan marka ay safaradu soo kabsanayaan.
Shirkadda safarku waxay sahmin doontaa sida loo isticmaalo tignoolajiyada si ay si wax ku ool ah ula macaamilto macaamiisha khadka tooska ah, ayaa daaha ka qaaday cilmi baadhis ay maanta (Isniin 1 November) soo saartay WTM London iyo Travel Forward.
Ku dhawaad ​​700 oo maamule sare oo ka socda warshadaha safarka ayaa la waydiiyay sida ay istiraatijiyaddoodii tignoolajiyadu isu beddeshay Covid. Tobankiiba lix (60%) muunada ayaa sheegay in ay eegayeen habab loogu adeegi karo macaamiil badan oo internetka ah halkii ay shaqsi ahaan ahaan lahaayeen.
Ku dhawaad ​​kala badh (48%) ayaa kor u qaadi doona xiisahooda isticmaalka tignoolajiyada si ay u horumariyaan khibrada guud ee socotada, oo ay ku jiraan isdhexgalka offline iyo sidoo kale wada sheekaysiga dhijitaalka ah.
Boqolkiiba wax yar ka yar (41%) ayaa sidoo kale sahamin doona habab tignoolajiyada lagu dhimo kharashaadka.
Ujeedooyinka waa isku xiran yihiin. Kordhinta fursadaha dadka socotada ah si ay iskood ugu adeegaan, ama online loogu adeego iyada oo aan lala xidhiidhin xarunta wicitaanka, waa waayo-aragnimada macmiilka ee ka wanaagsan. Laakiin tignoolajiyadaani waxay sidoo kale yaraynaysaa isu socodka xarunta xidhiidhka, taasoo la micno ah in shaqaaluhu ay xoogga saari karaan maaraynta weydiimaha aan si toos ah loo samayn karin. Kharashyada kaliya lama dhimin ee sidoo kale waa la hagaajiyay.
Automation-ku waa aag ay shirkadaha diyaaradaha, gaar ahaan, u baahan yihiin inay maalgashadaan, sida uu qabo McKinsey. Waxa ay xustay in sidayaaluhu ay eegaan automation-ka soo wajahan macaamiisha, sida dukaamada iskaa wax u qabsada ee garoomada diyaaradaha iyo sidoo kale shaqada dhabarka ee shaqada sida xisaabinta dakhliga iyo qaansheegadka.
Meel kale, Warbixinta Warshadaha ee WTM waxay sidoo kale xaqiijisay in Covid uu bedelay istiraatiijiyadda farsamada ee ku dhawaad ​​​​shirkad kasta oo safar ah. In ka yar tobankii shirkadoodba hal (9%) ayaa sheegay in istiraatiijiyadooda teknolojiyadda mustaqbalka ay la mid noqon doonto sidii ay ahayd ka hor faafitaanka, iyadoo 3% ay dhab ahaantii sheegeen inay ka soo baxeen masiibada oo ay go'aansadeen inay xoogga saaraan tignoolajiyada. .
Simon Press, Maamulaha Bandhigga, WTM London iyo Horu-marinta Safarka, ayaa yiri: "Doorka tignoolajiyada ayaa inta badan hoos loo dhigaa horumarinta khibradda macaamiisha ee khadka iyo khadka tooska ah iyada oo gacan ka geysaneysa dhimista kharashyada, warbixinteenna waxay muujineysaa in darawalladani ay aad u sii faafi doonaan marka safarku soo kabsado. .
Laakiin waxaa laga yaabaa in ugu weyn ee la qaadanayo ay tahay in ku dhawaad ​​​​90% muunaddeenna ay sheegeen in istiraatiijiyadoodii teknolojiyadda ee 2022 ay isbedeshay natiijada dillaaca, taas oo ah war aad u wanaagsan qof kasta oo ka qeyb gala, soo bandhiga ama xitaa booqda WTM London iyo Safarka Hore ee sanadkan, halkaas oo Hal-abuurayaasha warshadaha ayaa gacanta ku haya si ay ula wadaagaan aragtidooda iyo khibradooda. "